Xaafaddo guryaha aysan laheyn albaabo!! | Radio Himilo
Home / Deegaan / Xaafaddo guryaha aysan laheyn albaabo!!
Posted by: Mahad Mohamed August 4, 2020
Himilo – Rumeyso ama harumeysan, waxaa jirta xaafad dalka Hindiya ku taalla oo guryaha, xarumaha wax-barashada iyo ganacsiga, iyo xittaa bangiyada aysan lahayn albaabo. Lacagta cad waxaa lagu ridaa qasnad aan xirnayn, waxaana mararka qaar ku jira dahab qaali ah.
Previous: Chelsea oo ku qasban in ay £80m ka bixiso Chilwell
Next: Bayern Munich oo isaga hartay tartanka loogu jiro Kai Havertz